ဂရိက အမေရိကန်နှင့်ဆိုက်ပရက်စ်တို့နှင့် မြေထဲပင်လယ်အတွင်းပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုပြုလုပ် ( တူရကီနဲ့ ဂရိတို့ တပွဲ တလမ်း စမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ....)
ဂရိက အမေရိကန်နှင့်ဆိုက်ပရက်စ်တို့နှင့် မြေထဲပင်လယ်အတွင်းပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုပြုလုပ် ( တူရကီနဲ့ ဂရိတို့ တပွဲ တလမ်း စမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ….)
ဂရိမီဒီယာများအဆိုအရ သုံးပွင့်ဆိုင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ၏အင်အားစုများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကို Greek National Defense General Staff က ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဂရိနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီ မှစ၍ မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် ပူးပေါင်း၍ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တူရကီသတင်းစာ Zaman ကဖော်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါနိုင်ငံများသည် တူရကီနှင့် အဆင်မပြေမှုဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံများလည်းဖြစ်သည်။
ဂရိနဲ့ဆိုက်ပရက်စတို့ဟာ အီဂျစ်၊ UAE ၊ ပြင်သစ် နဲ့ အစ္စရေးတို့လို တူရကီကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အရှေ့ဘက် မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှာ တူရကီရဲ့ စူးစမ်းလေ့လာနေမှုတွေကို အစဉ်တစိုက်ဆန့်ကျင်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိက အမရေိကနျနှငျ့ဆိုကျပရကျဈတို့နှငျ့ မွထေဲပငျလယျအတှငျးပူးတှဲစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမြားကိုပွုလုပျ ( တူရကီနဲ့ ဂရိတို့ တပှဲ တလမျး စမျးဖို့ ပွငျဆငျနကွေပါပွီ….)
ဂရိမီဒီယာမြားအဆိုအရ သုံးပှငျ့ဆိုငျစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုကို ဆောငျရှကျခွငျးသညျ နိုငျငံသုံးနိုငျငံ၏အငျအားစုမြားအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကိုမွှငျ့တငျရနျ ဖွဈကွောငျးနှငျ့ ထိုလကေ့ငျြ့ခနျးမြားကို Greek National Defense General Staff က ဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
ဂရိနှငျ့ဆိုကျပရပျဈတို့သညျ ပွီးခဲ့သညျ့နှရောသီ မှစ၍ မွထေဲပငျလယျအရှပေို့ငျးတှငျ ပူးပေါငျး၍ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမြားပွုလုပျခဲ့ကွောငျး တူရကီသတငျးစာ Zaman ကဖျောပွခဲ့ပွီး အဆိုပါနိုငျငံမြားသညျ တူရကီနှငျ့ အဆငျမပွမှေုဖွဈနသေညျ့ နိုငျငံမြားလညျးဖွဈသညျ။
ဂရိနဲ့ဆိုကျပရကျစတို့ဟာ အီဂဈြ၊ UAE ၊ ပွငျသဈ နဲ့ အစ်စရေးတို့လို တူရကီကို ဆနျ့ကငျြဖို့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကို ပွုလုပျထားခွငျးဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ အရှဘေ့ကျ မွထေဲပငျလယျဒသေမှာ တူရကီရဲ့ စူးစမျးလလေ့ာနမှေုတှကေို အစဉျတစိုကျဆနျ့ကငျြနခေဲ့ကွတာလညျးဖွဈပါတယျ။
တာဝန်မယူတတ်တဲ့ ခွေးတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကြောင့် စားစရာမရှိ နေမကောင်းလည်းဖြစ်နေရှာတဲ့ညီမလေး 😔 (တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမို့ ကူညီပေးကြပါဦး🙏)
အီရန်က ရေနံတင်သင်္ဘောကို ဖမ်းဆီး လိုက်ပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယား က သူ၏ စစ်တပ်ကို စေလွှတ်
အိန္ဒိယရေတပ်သည် ရေအောက်စစ်ဆင်ရေးအထူးပြု ကော်ဗက်စစ်ရေယာဉ် တစ်စီးအား တပ်တော်ဝင် ( အိန္ဒိယရေတပ် အင်အားကြီးလာလေ မြန်မာအတွက်ကောင်းလေ တရုတ်အတွက် လုပ်ရှားက ခက်လာလေလေ )